Traintravel မော်ကွန်း | စာမျက်နှာ6၏ 16 | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ကျနော်တို့ကအမြဲပိုက်ဆံကယ်ဖို့ပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နယ်လှည့်အတှေ့အကွုံလုပ်ရန်ကြိုးစားများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများနှင့်အလှည့်ကွက်လျှောက်ထား, အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု. ပင်လယ်ရပ်ခြားနိုင်ငံများမှအားလပ်ရက်များ၌ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခြင်းသည်သင်၏အချိန်ကိုထူးခြားစေလိုခြင်းဖြစ်သည်. ဥရောပသို့ခရီးထွက်ခဲ့ကြသူများစွာသည်အတော်ပင်ပျော်မွေ့ခဲ့ကြသည်…